China HSG01-E Series Hydraulic sịlịnda ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Xinrun
HSG ụdị injinịdrọlik cylinder bụ okpukpu abụọ na-eme otu pịlịkị hydraulic, nke nwere njirimara nke usoro dị mfe, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, mgbakọ na-adaba adaba na mkpofu, njikwa dị mfe, ngwaọrụ nchekwa na ụdị njikọ dị iche iche. Ọ na-bụ-eji na-ewu ígwè, ụgbọ njem, mbupu, na-eweli igwe, Ngwuputa ígwè na ndị ọzọ ọrụ.
Nyocha na imewe
1.Our ụlọ ọrụ nwere 6 injinia na 20 afọ, 40 afọ nke oru ahụmahụ.
2.Hydraulic cylinder bụ ihe a na-ejikarị arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe, na ihe ndị ọ chọrọ dị na ya dịkwa elu. Ọ na - ejikarị ụdị nrụgide gwụ iji mee ka ọla kọpa ya dị ka plastik na ọnọdụ nkịtị. The ojiji nke Rolling ngwaọrụ bụ itinye a ụfọdụ mgbali n'elu nke ngwaahịa, nke mere na elu metal nke ngwaahịa ga nwere plastic ọrụ, ma jupụta ya n'ime ala concave ndagwurugwu nke mbụ mmapụta, ka ime ka workpiece mepụta Ihe siri ike nke ngwaahịa ahụ belatara. N'ihi nrụrụ plastik nke metal dị elu nke nwere nrụgide hydraulic, hardening oyi nke oyi akwa na nhazigharị nke ọka na-etolite ụdị fibrous ziri ezi. Ike na ekweghị ekwe nke ihe mmapụta oyi akwa na-mma, si otú ahụ melite corrosion-eguzogide ma na-eyi ndị na-eguzogide nke workpiece ngwaahịa.
3.Design nke hydraulic cylinder kwuru:
a.The ojiji nke akụrụngwa, workpiece ọnọdụ.
b.Strural e ji mara nke na-arụ ọrụ usoro, ibu ọnọdụ, ọsọ chọrọ, ọrịa strok size na ihe chọrọ.
c.The họrọ arụ ọrụ mgbali nke haịdrọlik usoro.
4.We nwere ike ime ka cylinder dị ka ndị ahịa 'logo.
5.Our hydraulic cylinder anyị nwere ọtụtụ ụdị, nwere ike ime dị ka ihe ndị ahịa chọrọ, nkọwa na ịbịaru ọ bụla.
A na-eji haịdrọlik eji arụ ọrụ maka ibugharị ụgbọ ala, igwe mbukota, ndị na-ewe ihe ubi, ndị na-akọ ugbo hydraulic na-akọ ugbo, ikpo okwu na-ebuli elu.
Nke gara aga: Excavator Hydraulic sịlịnda
Osote: Hydraulic Flap Telescopic sịlịnda
Ugboro abụọ aghọ Telescopic Hydraulic sịlịnda
Hsg Hydraulic sịlịnda
Na-abụ abụ Telescopic Hydraulic Cylinder
Single Na-arụ Ọrụ Hydraulic sịlịnda
Ngwaahịa nkọwa 1. Telescopic haịdrọlik cylinder na-akpọ multi-ogbo haịdrọlik cylinder. Ọ na-emi esịnede abụọ ma ọ bụ multi-ogbo pistin cylinders, tumadi ekewet nke cylinder isi, cylinder gbọmgbọm, uwe, pistin na n'akụkụ ndị ọzọ. Enwere ọdụ ụgbọ mmiri na ntinye nke a na B na nsọtụ abụọ nke gbọmgbọm cylinder. Mgbe mmanụ batara n'ọdụ ụgbọ mmiri a na mmanụ wee laghachi n'ọdụ ụgbọ mmiri B, a na-akwagharị piston mbụ nke nwere mpaghara dị irè karị, mgbe ahụ obere pistin nke abụọ na-agagharị. N'ihi na ọnụọgụ ...